By Huawei 5G - teknoolajiyada anteenada & algorithm gaarka ah, Wi-Fi 6 isku xigxiga ee alaabada Huawei AirEngine waxay ka caawisaa ganacsiyada inay abuuraan shabakadaha Wi-Fi 6 oo laga jaro godadka daboolida, waxay bixiyaan adeegyo aan dib u dhac lahayn, iyo inayna helin baakad lumis ah inta ay socoto. Tani waxay u oggolaanaysaa aagag kala duwan, iyo sidoo kale madaarka dijital ah, waxbarashada dhijitaalka ah, maalgashiga omni-channel, dowlad caqli badan, daryeel caafimaad oo caqli badan, iyo soosaar caqli leh, oo u dhaqaaqaysa dhanka gegida kambuyuutarka ee gebi ahaanba wireless.
Huawei waa ganacsadaha ugu horreeya ee wareejiya badeecadaha Wi-Fi 6 & u galiya isticmaalka ganacsiga. Ilaa taariikhda, Wi-Fi 6 Huawei AirEngine APs waxaa laga isticmaalay 5 meelood oo adduunka oo dhan ah.
Maaddaama ay tahay shirkadda ugu sarreysa qalabka isgaarsiinta, Huawei waxay ku biirisay waddooyin fara badan oo isugu jira LTE 4G router. Qaar badan oo iyaga ka mid ahna waxay macaamiil heer sare ah ka helaan sida tayada sare leh & waxqabadka joogtada ah. Iyada oo loo marayo saamiga waxqabadka-sareeya, 4G wireless-ka router-ka ee loo yaqaan 'SIM card' iyo dekedda Ethernet ayaa caan ka noqday Bariga Dhexe, Aasiya, Yurub, Ameerika iyo Afrika. 4G Mobile Huawei Router ayaa si gaar ah caan ugu ah macaamiisha sababtoo ah shaqo tayo sare leh & naqshadeynta moodooyinka casriga ah ee cabirka jeebka si loogu isticmaalo.
Iyadoo la ballaarinayo shabakadaha LTE wireless, Huawei xitaa waxay soo bandhigtay curinta LTE router-keeda si ay ula kulanto tiknoolajiyaddii ugu dambeysay ee LTE Pro Advanced oo la jaanqaadaysa shabakado kala duwan. Jiilkii ugu dambeeyay ee routerka 'LTE Huawei router' ayaa si tartiib tartiib ah ugu soo koraya waxyaabo badan oo moodada ah. Tan ugu muhiimsan ayaa ah LTE Huawei Router oo laga helo Ethernet dekedda & kaarka SIM-ka ama moobiillada wareega ee 'mobile LTE' waxay bixiyaan waxqabad lagu kalsoonaan karo & xasilloon oo loogu talagalay macaamiisha dhammaadka ah.
Buuggan gacantu wuxuu tixraacayaa EchoLife HG520s Huawei router, wali wuxuu khuseeyaa inta badan Huawei router guud ahaan.
Tag router-ka cinwaanka IP-ga daaqadda biraawsarka dhowaan.
Cinwaanka saxda ah ee router-ka qaabeynta waa 192.168.1.1.
Guji aasaasiga qaybta bidix.
Gali cinwaanka Furan DNS ee Koowaad Server Server iyo Qeybaha Server Server DNS, ka dibna riix badhanka Gudbi.
Kaliya hoos u dhig dejimaha xaadirka ah ee DNS kahor intaadan badalin Open DNS, haddii aad rabto inaad dib ugu noqoto goobihii hore sababo jira awgood.
Mar alla markii aad habeysatid goobahaaga DNS oo aad gujiso badhanka Gudbi, waxaan si weyn kugula talineynaa inaad nadiifiso xallinta xallinta DNS & bogagga shabakadda si aad u xaqiijiso in qaabeyntaada qaabeynta ugu dambeysa ee DNS ay saameyn deg deg ah ku yeelanayso.
Tallaabooyinka Tilmaamaha Qaabeynta
Soo gal Qaabeynta bogga Huawei Router adoo ku qoraya IP-ga soo socda sanduuqa URL: 192.168.100.1. Abaabulka gelitaanka waa:
Soo gal; telecomadmin
Furaha sirta ah; admintelecom
U guuritaanka LAN> DHCP Qaabeynta Server
Hubinta 'Kartiyeynta adeegga aasaasiga ah ee DHCP'
Hubinta Karti-siinta DHCP L2 Relay
Soo gal serverka DNS:
Si aad u habeyn kartid router-ka OpenDNS, waxaa si aad ah loogu soo jeedinayaa inaad nadiifiso qalabka wax lagu xaliyo ee DNS & keydka shabakadda si aad u hubiso in qaabeynta qaabeynta ugu dambeysay ee DNS ay saameyn deg deg ah ku yeeshaan. Intaas waxaa sii dheer, haddii aad leedahay cinwaan IP firfircoon si fudud u aqri maqaalkan kaa qaadi doona sida caadiga ah loogu cusbooneysiiyo cinwaanka IP-ga firfircoon.
Kaliya booqashada: http://www.opendns.com/setupguide/#resultsBalso goobaha ugu dambeeyay ee DNS.
Deji TP-Link Router
Hubi WiFi Signal Xoog
Liiska madow / Isticmaalayaasha WiFi
Waa maxay kulkulleeyaha WiFi?
Hagaaji Aagagga Wiilka WiFi
Ilaali shabakadaada WiFi
Waa maxay Cinwaanka IP-ga ah?
Muxuu internet-kayga u gaabiyaa?
sida loo helo root router ip
Sida dib loogu dajiyo router-kaaga goobaha caadiga ah
© 2021 192.168.8.1 • Lagu dhisay GeneratePress